na-etinye ọla kọpa
Ngwunye Ngwunye Ọkụ Na-edozi Ahụhụ
Ngwunye Ngwunye Ngwunye Njikere na Ngwá Agha Ịgba Ogologo IGBT
Ebumnuche dermepụta wired ọla kọpa abụọ iji tinye turrets ndị ọzọ na ogwe osisi buss
Ihe Solder tinye ọla kọpa / nickel buss mmanya, 2 tinned tọrọ atọ ọla kọpa wires, brazing osisi
Okpomọkụ 446 ºF (230 ºC)
230 kHz ugboro ugboro
Akụrụngwa • DW-UHF-6kW sistemụ kpo oku, nke nwere isi ọrụ dịpụrụ adịpụ nke nwere otu 1.2μF capacitor.
Usoro A na-eji eriri igwe agbaji agbaji agbaji iji jikọta mgbakọ mmanya. A na-etinye wires ọla kọpa 2 na turrets ma tinye ike ya maka 30 sekọnd. A na-eji aka na-enye mkpanaka nkwado ahụ n'akụkụ akụkụ ahụ kpụ ọkụ n'ọnụ na braze na-aga kwa, na -emepụta njikọta ahụ.
• Na-ebelata oge nkwụsị
• Nwekọ ọnụ iji kwado na-agbanwe agbanwe
Categories Technologies Tags mgbanaka dị elu na-etinye aka na ọla kọpa, akwa wired ugboro ugboro, mgbakwunye ọla kọpa, RF na-etinye ọla kọpa, RF na-agbakwunye wired, na-etinye ọla kọpa, eriri ígwè
Ngwunye Mgbakwunye Ngwunye Ngwunye
Ngwunye na-eme ka akpụkpọ anụ kpoo akpụkpọ ụkwụ na-ejikọta ya
Ebumnuche: Iji kpoo ngalaba nke 3/8 ″ tubing ọla kọpa tinyere ikpere 900 maka ịgbado. A ga-eji tubing ọla kọpa mee ihe na Ice Machine Evaporator Assemblies, na ịgbanye ọkụ na-ewere ọnọdụ mgbe etinyechara tubes n'ime mgbakọ ahụ. Hekpọ oku ga-ewere ọnọdụ na ụdị eriri igwe iji nye nnweta dị mfe, ozugbo awụnyere tubing ahụ. Solder nwere ike iji aka nri mgbe okpomọkụ
Ihe: 3/8 ″ Thin Walled Copper tubing and 900 Elbow
Ngwa: Site n'iji DW-UHF-20kW wepụta ike ntinye ike nke ike na ụzọ ntanetị atọ (3), e nwetara nsonaazụ ndị a:
E nyere 6000F na 10 sekọnd.
A quality solder nkwonkwo hụrụ zuru ezu eruba na elu udidi.
Akụrụngwa: DW-UHF-20kW na-ewepụta ezigbo ike itinye ọkụ n'ime ya gụnyere otu (1) ọdụ ọkụ dịpụrụ adịpụ nke nwere otu (1) 1.2 μF capacitor, yana igwe pụrụ iche atọ (3).
Categories Technologies Tags mgbakwunye ọla kọpa, mgbakwunye ọla kọpa na-emepụta ihe, na-etinye ọla kọpa, ngwusi ọla kọpa, na-etinye ọla kọpa tube, ntinye akwa coppr